Izakhiwo ezine-Vestigial Foundings of Humans
Izilwanyana kunye Nendalo Bungqina
Enye yezona zihlandlo ezikhankanywe ngokuphindaphindiweyo ngokuziphendukela komntu kukukho izakhiwo zokuhlala . Izakhiwo ze-Vestigial ziindawo zomzimba ezibonakala zingenayo injongo okanye umsebenzi. Mhlawumbi baye benza, kodwa kwindlela ethile balahlekelwa yimisebenzi kwaye ngoku kungenasiphelo. Ezinye izakhiwo emzimbeni womntu zicingelwa ukuba ziye zangasese, kodwa ngoku zinomsebenzi omtsha.
Abanye bayakuxela ukuba ezi zakhiwo zinenjongo kwaye aziyiyo ingxaki emva kwayo yonke into. Nangona kunjalo, akukho mfuneko yangempela kubo emzimbeni womntu ngokubhekiselele kokusinda, ngoko ke bayabalwa njengezakhiwo zobungqina. Oku akubonakali ukuba ngelinye ilanga banokuthatha umsebenzi ofunekayo ukuze usinde kwaye uza kuphinda asebenze emzimbeni womntu. Ezi zilandelayo zimbalwa zezakhiwo ezibonakala ngathi zishiywe ukusuka kwinguqu yangaphambili yabantu kwaye ngoku abanakho umsebenzi ofunekayo.
Isihlomelo esixhomekeke emathunjini amakhulu. I-MedicalRF.com / Getty Izithombe
Isihlomelo sisilungelelaniso esincinane kwisitampu esikhulu esiseduze ne-cecum. Kubukeka bufana nomsila kwaye kufumaneka kufuphi nalapho iintlungu ezincinci nezikhulu zidibana khona. Akukho mntu owaziyo umsebenzi wangempela we-appendix, kodwa uCharles Darwin ucebise ukuba sele isetyenziswe ngamabhondi ukuze igaye amaqabunga. Ngoku, isihlomelo kwisibalo sibonakala sisisitorethi seentlobo zebhaktheriya ezisetyenziswe kwikoloni ekuncediseni ukutyalwa kunye nokutywala. Ezi bhaktheriya, kunye nabanye, zingabangela i-appendicitis kwaye, ukuba ingashiywanga, ingaba yingozi xa isithasiselo sihlukana kwaye izifo zifayo.
Uphando olutsha lubonakala lubonisa ukuba isihlomelo singenakucala emva koko konke. Mhlawumbi oku kubonisa ukuba isihlomelo sithatha umsebenzi omtsha kwaye, ngokuzayo, kufuneka ukuba kusinde abantu.
I-coccyx isakhiwo sendawo ebantwini. I-Photo Photo Library / Getty Izithombe
Ifakwe kwizantsi le-sacrum yi-coccyx, okanye umsila wesithambo. Le nto encinci, ukubonakala kwebony ibonakala iyindawo ephumayo yokuziphendukela kwemvelo. Kukholelwa ukuba ookhokho babenomsila kwaye bahlala emithini. I-coccyx iya kuba apho umsila udibaniswe khona. Ekubeni umsila kubantu sele ukhethwe ngokubhekiselele kwendalo, i-coccyx ayidingekile kubantu bemihla yanamhlanje. Sekunjalo, kuseyiyona nxalenye yesifo somntu.
UMicky Zlimen / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0
Ngaba wakha waphawula ukuba inqabana encinane yesikhumba efihla ikona yangaphandle yeliso lakho kweso? Oko kubizwa ngokuba yi-plica luminaris, kwaye isakhiwo sendawo. Ayinayo injongo, kodwa kusekho okhokho bethu. Kukholelwa ukuba yakuba yinxalenye yesigxina sokumisa. Izitampu ze-Nictitating zifana neentsiphe zesithathu ezihamba ngaphesheya kweso ukuze zikhusele okanye zitshintshe njengoko zifunekayo. Uninzi lwezilwanyana lusebenza ngokugqibeleleyo kwiimbrane, nangona i-plica luminaris ngoku isakhiwo esiphezulu kwezinye izilwanyana.
Ngenabo ubumnandi bokukrazula, i-arrector second muscle is vestigial. I-US-Gov / i-Wikimedia Commons / i-domain yoluntu
Xa abantu bebanda, okanye ngamanye amaxesha benoyika, bafumana i-goose bumps. I-Goose bumps zibangelwa yi-arrector second muscle kwi-kontrakthi ekhontrakthi kunye nokudonsa iinwele zeenwele phezulu. Le nkqubo yonke iyindawo ebantwini ngenxa yokuba asinayo inwele ngokwaneleyo okanye ubomvu ukwenza ukuba kulungele. Ukunyuka kweenwele okanye ubomvu kudala iipokotshi zokubamba umoya nokufudumala umzimba. Kwakhona kunokukwenza ukuba isilwanyana sibonakale sikhulu kunokuba sisongelo. Abantu bafumana impendulo yesigxina sesibini esithatha iinqwelo zentloko, kodwa abanako uboya obaneleyo okanye iinwele ukuze impendulo isebenze ngokwenene.
Izakhi zoLungelelaniso kwi-Evolution
Ukongeza i-AC kwi-Car Car
I-Longboard ye-Advanced-Dancing Dancing Tips Tips
Isingeniso ku-Preg kwi-PHP
Ngaba iMidri yeGolide yamaGoli e-Olympic?
Imixholo Yomlando Omnyama Imixholo